Guddiga Madaxa banaan oo soo sartay lacagaha siyaasinta ay ku ololeen karaan – The Voice of Northeastern Kenya
Guddiga Madaxa banaan oo soo sartay lacagaha siyaasinta ay ku ololeen karaan
Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqqano IEBC ayaa maanta soo saaray lxadiga lacagaha ay ku ololeen karaan siyaasinta u tarmeyso xilalka kaladuban doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo sanadka fooda inagu soo hayso 2017-ka.
Sidoo kale IEBC ayaa tilaabadaasi waxay sidoo kale kasoo sartay xisbiyada siyaada sidii ay ugu ololeen lahaayen doorashooyinka.
Gudigan ayaa sheegay in xisbi kasta oo dalka ka jira looga baahan yahay in sanadka 2017-ka ay isticmaalen lacag dhan 15 bilyan oo shilin waxayna sidoo kale u ogolaaden qofka u tartmaya in uu isku soo sharaxo xilka madaxtinima uu isagana uu ololahiisa u isticmaalo lacag dhan 5.2 Bilyan oo shilin.
Xilalka kale oo loo tartamto doorashada guud ee la filayo in ay dalka ka dhacdo 8 bisha Agosto ee sanadka soo soocodo ayaa iyagana lasoo saaray xadiga lacagaha ay ku ololeen lahaayeen.
Xilalka Gavanaha iyo seneteha iyo xilka wakiilka haweenka u matasha countiga Nairobi ayaa ololohooda ku qarash gareen doono in kabadan 400 milyan oo shilin.
Balse xilalkaasi siyaasinta ugu tartameysa Countiga Lamu ayaa ololohooda doorasha isticmaali doonaa 13 Milyan oo shilinka dalka ah.
Xildhibaanada iyo wakiilada Countiyada ayaa lagu sheegay warbixintaasi kasoo baxday IEBC in ay isticmaali doonaan lacago kala ah 33 milyan iyo 10 milyan balse wakiilada Waqooyiga Mandera ayaa iyaga ku qarasha gareyn doonan ololahoda lacag intaas kabadan oo dhan 10.3 milyan.
← Maxkamada sare oo sheegtay in qareenkii goor sii horeysay la dilay loo aqoonsado nin halyeey ah
Dalkan Kenya oo la sheegay in uu hogaanka u hayo shaqo la’aanta gudaha qarada Africa →